> Resource > Video > Sida loo Beddelaan PowerPoint 2007 ilaa Video
Slide PowerPoint naga caawin kartaa isticmaali naqshadeynta iyo rasaas si ay u sameeyaan dhibcood cad hadal ka yar. Laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay inuu ciyaaro PPT on qalabka ama share kala duwan ee YouTube, Facebook, ama blog. Xaaladahan, aad leedahay si loogu badalo PowerPoint in video.
PowerPoint 2007 waa version la soo dhaafay in uusan haysan shaqo ee keydinta video. Laakiin maaddaama ay tahay weli si weyn loo isticmaalo dunida, tiro badan oo dad u baahan in la badalo PowerPoint 2007 ilaa video. Hadda PPT2Video Pro bixisaa xal kaamil ah si loogu badalo PowerPoint 2007 in qaabab video ay ka mid yihiin AVI, wmv, FLV, dhameystiran la saamaynta PowerPoint asalka ah. Halkan aynu isla eegno sida ay u badalaan PowerPoint 2007 ilaa Video la software this.
1 Ku rakib iyo Import PPT Files
Ka dib marka aad PPT2Video Pro lagu rakibay on your computer, waxaa lagu daahfuri dooro "Abuur Video Faylal ay ka PowerPoint" ee shaashadda soo dhawaynayaa. Markaas suuqa kala ah sida hoos ku arbushin doonaa. Halkan guji "Add 'inay dajiyaan tjenesten 2007 files ka disk deegaanka. Markaasuu ku dhacay "Next".
Fiiro gaar ah: Waxaad ku dari kartaa ilaa 12 PowerPoint files si hal mashruuc hal.
2 Calan Settings Output ah
Dooranaysaa qaabka wax soo saarka video ka mid ah liiska hoos-hoos ah (halkan 130 nooc oo ah video iyo qalabka profiles waxaa la siiyaa). Haddii aad u baahan tahay, guji "Config 'in la beddelo xallinta, heerka jir, heerka muunad, heerka yara oo dheeraad ah.
Guji "Settings Advanced" in la beddelo qaabka goobaha sida background image, size video iyo logo, music asalka, iyo dhawaaqu recorder- aad dooratay oo dhan.
3 bilow diinta PowerPoint 2007 ilaa Video
Guji "Next" dooro folder saarka ah si ay u bilaabaan diinta soo bandhigidda si video. Markii diinta lagu sameeyo, guji "Finish" si aad u eegto video galka cayimay. Markaas waxaad u ciyaari karaa Windows Media Player inay tijaabiso saamaynta.
Sameeyey! Waxaad arki Way fududahay in la badalo PowerPoint aad 2007 files si video. Hadda download software iyo aad u bilowdo!